Banaamijka MFIP iyo FSS ee dhibanaha rabshadaha qoyska | LawHelp Minnesota
Banaamijka MFIP iyo FSS ee dhibanaha rabshadaha qoyska
MFIP and FSS for Family Violence Victims (PDF)300.54 KB
Banaamijka MFIP iyo FSS ee dhibanaha rabshadaha qoyska (PDF)319.09 KB
Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah.
Haddii aad tahay dhibane rabshado qoyska dhexdiisa ah, waxaa laga yaabaa in lagu siiyo tanaasul lagu darayo qorshaha shaqaalaynta (EP). Rabshado qoys waa marka qof (labada isu dhaxa, dad wada degan, qof hore oo aad xiriir u lahaydeen ama xiriir jinsi idin dhexmaray, ilmahaaga, ama waalidkaa) uu adiga ama ilmahaaga oo ku dhibayo, uu ku hanjabayo in uu dhib u gaysto addiga ama ilmahaaga ama si kale kuu cabsi gelinayo addiga ama ilmahaaga.
Waxaa suurta gal in aad buuxiso shuruudihii laga rabay in lagu siiyo tanaasulka qoys rabshado haysato, haddii waqtigan la joogo arrintaasi ku haysato laakiin aad weli la ka soo kabaneyso raadki rabshadahaasi lahaayeen ama aad ku dhex jirto sidii aad uga soo bogsan lahayd. Tusaale: addiga ama ilmahaaga ayaa qaata tala bixin la xiriirta rabshado ama waxaad aadaa maxkamad oo waqti kaa qaata sabab la xiriirta rabshado.
Can my MFIP plan be changed because of family violence?
If you are a victim of family violence, you may be able to get a family violence waiver added to your Employment Plan (EP). Family violence is when someone (your spouse, your boyfriend or girlfriend, your ex, someone you dated briefly and/or had sex with, your child, or your parent) is hurting you or your children, threatening to hurt you or your children, or makes you afraid for you or your children in another way.
You may qualify for a family violence waiver if you are not currently experiencing violence but are still dealing with its effects or working towards healing. Examples: you or your children are going to counseling due to the violence or you are spending time going to court because of the violence.
Sidee tanaasulka rabshadaha qoysku kuu caawimi karaa?
Bilaha lagu siiyay tanaasulka rabshadaha qoyska kama tirsana 60ka bilood ee la xadiday, markaas waxaa siyaadaya caddadka bilaha aad heli kartid Barnaamijka Maagelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP) ama Adeegga Xasilinta Qoyska (FSS).
Tanaasulka ku yimid rabshadaha qoyska waxa loo isticmaali karaa in lagu siiyo waqti siyaada ah. Si kale haddii loo sheego, haddii aad dhamaysatay 60ki bilood oo ay ku haysato dhibaatooyin la xiriira rabshado qoys, waxaad heli kartaa in aad dib ugu soo noqotid barnaamijka MFIP ama FSS.
Waxaad tirsataa saacadaha aad ku qaadatay hawlqabadka/dhaqdhaqaaqa la xiriira amaankaaga si loogu daro qorshaha shaqaalaynta. Hawlahaasi waxay noqon karaan marka aad aadayso tala bixinta si lagaaga caawiyo sidii aad ula xaali lahayd rabshadaha ama aad gurigaaga ugu u samaysan lahayd quful amaan ah.
Howlqabadka/dhaqdhaqaaqa adiga ama qoyskaaga u keeni kara khatar kuma jiri karaan qorshaha shaqaalaynta (EP).
Haddii aad samaynayso 20 – 35 saacadood oo hawlqabad ah ma aha aamin, waxaad heli kartaa saacado ka yar intaas in lagu daro qorshahaaga shaqaalaynta (EP).
Haddii aadanba mar hore ugu jirin FSS, waxaa lagaa saarayaa MFIP oo laguu beddelayaa FSS ka dib marka ugu horeysa ee la aqbalo tanaasulka rabshadaha qoyska. FSS waxay uun la mid tahay MFIP, laakiin way ku adagtahy la taliyaha shaqaalaynta in uu xayiraad saaro dadka macaamiisha u ah FSS, inta badan FSS waa is bedbedli kartaa.
Muxuu yahay qorshaha shaqaalaynta (EP)?
Hadii lagu siiyo MFIP ama FSS, waa in aad leedahay qorshe shaqaalayn. Qorshaha waxaa wada oo qoraya adiga iyo lataliyaha shaqaalaynta. Qorshaha shaqaalaynta wuxuu leeyahay 20-35 saacadood todobaadkii oo howlqabad ah iyadoo ku xirran da’da ilmaha kuugu yar. Dhaqdhaaqa/hawlgalka waxaa ka mid ah shaqa raadis, shaqayn, ama tababar. Fiiri xogta urursan MFIP: Employment Plans (Qorshayaasha Shaqaaleynta ee MFIP).
Haddii laguu tixgeliyey in lagaa daayo shuruudaha qaar rabshado qoyska dhex mara darted oo lagu daray qorshahaaga shaqaalaynta, waxaad tirsan kartaa waqtiga aad gelisay hawlaha la xiriira la xiriira amaanka. Waxaa laga yaabaa in aysan ahayn in aad samayso 20-35 saacadood todobaadkii haddii amaan kaaga wax yeelayso.
Haddii aadan samayn waxyaabaha ku jira EP, xafiiska MFIP ama kan FSS way ku xayiri karaan ama kaa jari karaan deeqda. Haddii 6 bilood oo xayiraad ku saarnaato waxaad si buuxda u waayaysaa deeqda MFIP iyoFSS.
Sidee u heli karra in tanaasulka rabshado qoys la iigu daro qorshaha shaqaalaynta (EP)?
U sheeg lataliyahaaga shaqaalaynta in aad u baahantahay tanaasulka rabshadaha qoyska.
Raadso u doode qoysaska rabshado haysto (hoos ka fiiri).
La taliyaha shaqaalayntu waa in uu ballan kuu qabtaa, la taliyaha shaqaalaynta iyo u doodaha qoysaska rabshaduhu haystaan waa in ay wada qoraan qorshaha shaqaalaynta iyo tanaasulka qoysaska rabshaduhu haystaan.
Sidee u heli karaa u doode?
La taliyaha shaqaalaynta waa in uu kuu diraa u doode kaa caawima sidii aad u qoran lahayd tanaasul rabshado qoys haddaad rabtid. Haddii aad hore u lahayd u doodaha rabshadaha guriga/gudaha ama sharci yaqaan ah la taliye sharci ah oo aad rabto in ay kula shaqeeyaan, iyaguba way noqon karaan u doode haaga. Adigaa khiyaar u leh ma aha shaqada la taliya shaqaaleynta.
Xayiraad laguma saari karo inta aad ka helayso u doode, u sheeg la taliyaha shaqaalaynta sida ugu dhaqsa badan. Si aad u hesho la taliye wac 1-(866) 223-1111.
Maxaa geli kara galka qorshaha shaqaalaynta (EP)/tanaasulka rabshadaha qoyska?
La taliyaha shaqaalaynta wuxuu foomka uu hayo ku dari karaa qorshaha shaqaalaynta si aad u hesho tanaasul. Foomku waxaa ku xusan waxyaabaha lagaa doonayo sida sida in aad telefoon haysatid mar kasta si aad wacdo u doodaha rabshadaha qoyska. Ma aha in hawl kasta aad ku qorto foomka, waxaad ku dari kartaa waxa aad rabto oo kale. Qorshe kasta waa ka duwan yahay kan kale. La taliyaha shaqaalayntu kuguma khasbi karo in aad samayso wax kasta oo adiga ama u doodahaaga aad u malaynaysaan in amaan darro ku jirto. Haddii la taliyaha shaqaalayntu isku dayo in aad samayso waxyaabo aad adiga ama u doodahaagu u malaynaysaan in nabad gelyo xumo ku jirto, racfaan ka qaado isla markiiba lana hadal gargaare sharci yaqaan.
Waxyaabahan waa in la xasuusto:
Haddii in aadan shaqayn amaankaaga oo aad u cabsaneyso darted xilligan, ma aha in aad shaqayso. Sababaha waxaa ka mid ah, marka aad shaqada aado waa lagu dabagelayaa, ama qof baa kugu kalifay in aad shaqadii hore ka tagto.
Haddii welwel amaan darro kugu jirto, waxaad shaqayn kartaa saacado ka yar inta caadiga ah ee qorshaha shaqaalayntu kaa rabto. Sida haddii aad rabto in aad caruurtaad ka soo qaaddo ama gayso dugsiga, ama waxaa ku haysta waxayaabo badan shucuurtaada kicin kara, ama arrimo xagga sharciga ah aan kuu ogolayn in aad shaqayso saacado caadi ah.
Adiga iyo qoyskaaga ma aadi kartaan melaha tala bixinta, ama daaweyn wadareed dabiici ah, ama dhakhtar cilmi nafsi ah oo ka mid ah waxyaabaha laguu siiyay tanaasulka rabshadaha qoyska. Laakiin haddi aad rabto in aad samayso waxyaabahaas oo aad ku darsatid saacadahaaga hawl qabadka, waad samayn kartaa. Haddii hawlahaas aad doorato in aad ku dartid qorshahaaga shaqaalaynta waa in aad heshaa xanaanada caruurta inta aad ka qayb qaadaneyso hawlahaas.
La taliyaha shaqaalayntu kuguma khasbi karo in aad qaadatid amarka kala badbaadinta ama amarka faduul ka cararka, in aad maxkamad ka markhaati furtid, aad wacdid booliska, ama aad la shaqaysid qaybaha sharci fulinta. Adiga keliya aayaa goosan kara in waxyaabahaasi amaankaaga waxba yeeli karrin. Markale, hadddii aad rabtid in aad samayso waxyaabahaas oo dhan, waa in aad heshaa xanaanada caruurta.
Maxaa dhici kara haddii aanan fulin qorshaha shaqaalaynta/ tanaasulka rabshadaha qoyska?
Haddii ay jiraan waxyaabo ku jira qorshaha shaqaalaynta oo aadan hadda u baahnayn, ama haddii xaalkaaga wax iska bedeleen, la hadal lataliyahaag shaqaalaynta iyo u doodahaaga isla markiiba. Adiga, la taliyaha shaqaalaynta iyo u doodahaaga waad shiri kartaan in aad wax ka bedeshaan qorshahaaga shaqaalaynta. Haddii aadan fulin qorshaha shaqaalaynta (ay ku jirto hawlaha amaankaaga), oo aadan haysan wax sabab macquul ah, waxaa lagu saarayaa xayiraad, waxaana bilaabanaya tirsiga 60ka bilood ee la xadiday. Waxaa aad muhiim u ah in isbedel la sameeyo isla markiiba, si aan arrintaasi u dhicin. Tanaasulka rabshdaha qoyska waxay inta badan dhamaadaan 3 bilood ka dib. Waxaad u baahantahay u doode markasta oo aad bedesho ama aad cusboonaysiiso qorshaha.
Maxaan yeelayaa haddii aanan ku raacsaneyn waxayaabo ay degmadu samaysay?
Haddii aysan degmadu ogolaan tanaasulka rabshdahaha qoyska ama hawlgal amaankaaga wax yeelaya, racfaan ka qaado isla markiiba lana hadal gargaare sharci yaqaan ah si uu kuu caawimo. Fiiri xogta urursan Welfare Appeals to DHS (Racfaan ka Qaadaashada Gargaarka dadaweynaha).